Ingaphakathi ngesitayela se-techno
Isitayela se-techno ekwakhiweni kwangaphakathi ngumkhiqizo wezwe lanamuhla ne-gravitation yayo kumafomu we-geometric kanye ne-minimalism. Lesi sitayela savela ekuqaleni kwekhulu lama-80 ekhulwini lama-20, futhi ngasekupheleni kweminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala yayisungulwe ngokuqinile ezindlini nasezindlini zethu ezivimbela abantu ukumangala ngendlela okwakwenziwa ngayo ngaphambili. Kuyinto inhlanganisela yemiklamo ehlukahlukene enefensimbi yensimbi ne-shades epholile nefenisha yeglasi. Lesi sitayela singabonakala njengokuphulwa komqondo wokuthi indlu kufanele ibe mnandi futhi ithambile, ilinde umnikazi wayo. Kungcono ukulingisa izakhiwo ezingenasiphelo futhi ezingabanjwanga, ngezinga elithile isikhumbuzo sokuthi awukho emhlabeni ngendlela evamile. Ukusetshenziswa kwemibala ekhanyayo kule ndlela yokuklama kuyamukeleka ngokuphelele, kepha kufanele kube yingxenye yeshumi yendawo yonke yangaphakathi. Ubuningi bezobuchwepheshe, izitsha zensimbi ekhishini, izesekeli ezisuka ensimbi nokubunjwa okufingqiwe yiyona nto ehlukanisa isitayela se-techno kusuka kwezinye izinkomba zokuklama.
Ukuntuleka kokuthungwa okufudumele kwemininingwane yangaphakathi, njengamaphepheni avela ezintweni zemvelo noma amakhethini endwangu - yilokho okungahle kuveze lesi sitayela sangaphakathi. Egumbini kukhona insimbi, itafula lesilazi, isiteji esivunguzayo, ikhabhinethi kanye namashalofu esakhiwo esiyingqayizivele, ngakho-ke, sizofana nesikhala esiphezulu esivela ezindabeni zikaStanislaw Lem, kodwa neze indlela yokuhlala engahlali kahle. Umbala ongasetshenziswa kule ndawo yangaphakathi isiliva, umbala wensimbi, i-metallic. Grey, emhlophe, emnyama, e-orange ecolile noma emnqumweni ovuthiwe. Yiqiniso, lokhu akudingekile, kodwa yibo abadala isimo sokuntuleka kokuphila komuntu kanye nokuzikhethela kokubakhona kobuchwepheshe. Mhlawumbe, lesi sitayela sizobonakala sengathi kukhona umuntu othukuthele, ompunga futhi omile, kodwa kungase kuhambisane nomklamo wefulethi kubantu abasha abahlala ikakhulukazi hhayi ekhaya, kodwa emphakathini.
Izici zangaphakathi kwi-Techno Style
Ngokuyisisekelo, lesi sitayela sinamakhono amaningi nezici eziyingqayizivele eziyizici kuphela kuye. Ngokuyinhloko, lokhu kusebenza kumbala kanye nezinto ezisetshenziselwa ukwakha isitayela esifanayo ngaphakathi kwendlu. Cabanga ngezici eziyinhloko nezici ezihlukile zesitayela se-techno:
Ukuntuleka kwempahla yemvelo, ukugqoka, ukukhanyisa kwemvelo ekwakhiweni.
I-predominance yemibala enjenge-gray, black, khaki, metallic, silvery, burgundy ethulisiwe, i-orange engcolile, ebomvu, emhlophe emhlophe noma enjenge-milky.
Ukuba khona efulethini noma endlini yezinyathelo zokuvunguza.
Ukuthungwa okunamandla ezindongeni.
Iminyango imithini yensimbi, idala umbono wezinsimbi ezinkulu.
Izesekeli nazo kuphela zensimbi.
Izihlalo ezinezigaxa emilenzeni yinye isici esihlukanisayo salesi sitayela ngaphakathi.
Kubalulekile ukuthi ube namadivaysi amaningi okukhanyisa, adlala indima yokuqhubeka kwezinto zokuhlobisa ngenxa yokuntuleka kwezici eziningi zokuhlobisa ezingaphakathi.
Ukusetshenziswa okuncane kakhulu kwezinkuni, ifenisha kufanele ibe yensimbi, ingilazi noma ipulasitiki.
Ngokuvamile, noma yiliphi igumbi lokulala lifana nekamelo lokukhiqiza elinokuningi kwezinto zensimbi zensimbi nemininingwane.
Konke ukuxhumana, ngokuvamile okufihliwe kunoma iyiphi enye ingaphakathi, lapha kungabonakala.
Uma ingaphakathi isebenzisa ifenisha ephakanyisiwe, ihlanganiswe nezikhwama ezikhethekile kanye nezembozo ezenza kube "kungakhululekile".
Lesi sitayela sifana nesitayela se-minimalism, i-constructivism ne-hi-tech.
Ukuchichima kwezici ezihlukahlukene kungenye yezici eziyinhloko zalesi sitayela sokuklama.
Okungenani konke kuyisiqubulo saleso siqondiso esinikeziwe ekuklanyeni kwamaphakathi.
Njengoba ungabona, lesi sitayela senza kube lula, kepha ungacabangi ukuthi kabusha kabusha kungakudla i-penny. Eqinisweni, akulula ukuthola futhi ukufaka ifenisha nemishini, ifenisha yanamuhla ihloselwe ekukhetheni kwendlela yokudala. Lo mklamo wangaphakathi, njengoba usuvele ukhulunywe ngawo, ufanelwe abantu abasha banamuhla abangakazami ukudala induduzo ngomqondo wakudala.
Ingaphakathi ekamelweni lokuphumula ngesitayela se-techno
Ekuqaleni, kufanele kushiwo ukuthi isitayela sobuchwepheshe bufanelekile kuphela kulelo gumbi lokuphumula, elizoba nesibalo esikhulu nobukhulu. Izindonga egumbini lokuphumula zidwetshwe kangcono embala ompunga obala, ukuthungathwa kungaba nzima. Ukufanisa udonga lwezitini ezikhanyayo nakho kuzofaneleka kakhulu kule ndawo yangaphakathi. Lo mphumela ungafinyelelwa ngosizo lwekhasi elikhethekile noma upende. Njengendwangu yokugqoka, ungasebenzisa i-linoleum yombala ofanele, umabula noma i-tile. I-plailing kumele ihambisane ngokuphelele nombala wezindonga, noma kunjalo, kufanele ibe nebala elincane kakhulu. Indima enkulu kule style yangaphakathi idlala ngokukhanyisa - kufanele ihambisane kahle futhi ikhanyise ngokugcwele igumbi lonke. Ifenisha kufanele ikhethwe ngokuhambisana nesitayela jikelele, kufanele ibonwe ngesitayela se-minimalism. Kungcono ukuthi zonke izilinganiso ze-geometric zigcinwe. I-sofa ingaba yesikwele noma i-rectangular, ngesimo somklami, okuyinto, uma kudingekile, ihlangene futhi ihlakazwe. Ithebula lekhofi likhetha ingilazi, izigxobo ezigcoba noma izihlalo zingenziwa ngensimbi noma iplastiki ephezulu. Esikhundleni samakhetheni kumafasitela, ungafaka ama-jalousi noma ama-blinder blinds.
Ingaphakathi ekamelweni lokulala ngesitayela se-techno
Igumbi kumele libe yindawo evulekile embala ekhanyayo, enebhedi yensimbi ngaphandle kwefenisha eyengeziwe, okuzobe ihlanganisa isikhala. Izindonga kanye nelayili kukhona ukusebentisa okulula ukudala ukuthungwa "okunzima". Amapulangwe angabekwa nge-cafe evuthayo, njengendlela yokukhetha, angaba marble. Kunoma yikuphi, ungasebenzisi i-carpeting noma i-carpet kulokhu kuklanywa - akufanele neze lapha. Hlala uqaphele ukukhanya kwekamelo lakho lokulala - ukufakwa okungavumelani kokukhanyisa izibani kuzokwenza indawo ibe yindawo efanele yokulala okuphumula. Ngamafasitela kungcono ukufaka izimpumputhe zombala we-metallic - zizofakazela ngokugcwele yonke ingaphakathi. Isifuba sabadwebi ekamelweni lokulala kufanele sibe sesincane, sincane futhi sibe nombala ozovumelaniswa ngokuhambisana namathoni anzima ekamelweni.
Ikhishi elingaphakathi ngesitayela se-techno
Ikhishi ngesitayela se-techno yindawo lapho ukubunjwa kwe-geometric ecacile kubonakala khona, futhi into ngayinye inendawo yayo. I-metal, ipulasitiki kanye nelayizibuko yizinto eziyinhloko ezikhona lapho zidala ukuklama okunjalo ekhishini. Ukushisa kwalesi sitayela ekhishini ngeke kubonakale njengokwesibonelo, ekamelweni lokulala, lapha ungachaza ukuba khona kwemishini eminingi, izakhiwo zeglasi, izitsha zensimbi nama-plastic panel. Imfenisha yekhishi ngesitayela se-techno kumele ithuthukiswe futhi yenziwe ngomyalelo ngamunye. Ungasho ngesibindi ukuthi lesi sitayela esingaphakathi kwekhishi namuhla sibonakala ngabakhiqizi abaningi njengezethembisayo kakhulu, ngoba ekhishini abesifazane abaningi bazama ukudala umyalelo omuhle futhi bafinyelele ekunciphiseni i-minimalism. Isimo kuphela sokudala ingaphakathi ngesitayela se-techno ekhishini yisikhala. Lesi sitayela sidinga indawo enkulu kanye nendawo, ngakho-ke kuyoba yinto enhle endlini enkulu, kunokuba igumbi elincane endlini yepaneli.
Amabhande ngaphakathi: izinhlobo nemithetho yokuzikhethela
Sakha ubudlova, amakhethini
Ngingabheka kanjani ikamelo elincane?
Imigomo eyisisekelo yekhishi le-ergonomic
Kulula futhi kulula: indlela yokuvuselela ingaphakathi ngaphandle kokukhanda nezindleko ezinkulu
Ukuzivocavoca ukuqinisa imisipha yezandla nesisu
Izinkinga zasebusika 2015: i-snodes nezinye izinjabulo
Uhlelo lwe-neervous and endocrine yomzimba
Sandwich eshisayo enezinkukhu kanye ne-apricot sauce
Izipancake ezenziwe esibindi
Ukuphakamisa imaski ebuso
Indlela yokubhala izinwele eziqondile
Kulula kangakanani ukuqala amantombazane?
I-Aloe evela emakhazeni avamile kubantwana
Gqoka ngamachashazi we-polka
Imfihlo ye-oily isikhumba ubuhle
Owesifazane uyinkosikazi, indoda iyinceku
Izindlela ezingu-10 zokujabulela ukuphila